Fọrọ nke nta onye ọ bụla anọwo na ọnọdụ mgbe i nwere ike na-eche na-egwu ọhụrụ na nwunye nke ọkacha mmasị gị show ma ndepụta okwu na-adịghị arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ị na-ahụ onwe gị na ndị dị otú ahụ a enwe ihe ijuanya banyere, na-eji otu n'ime ndị na-esonụ sobtaitel converters.
1. ogbe Ndepụta Okwu Ntụgharị
Ogbe ndepụta okwu Ntụgharị bụ kemfe ngwá ọrụ e mere iji tọghata sobtaitel faịlụ karịa 100 formats, gụnyere MKV, MKS na ọtụtụ ndị ọzọ. Gịnị bụ kediegwu banyere nke a adaba omume bụ na ọ na-akwado gaghị agara ngbanwe tinyere etiti ọnụego. Ọ dị mfe dị ka na-agbakwunye a song gị play-ndepụta, dị nnọọ ịdọrọ na dobe faịlụ n'ime ogbe Ntụgharị. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla pụrụ iche mmasị, kpatụ akakabarede nhọrọ ma ọ bụ nanị Ikwu akakabarede usoro. The okirikiri nhọrọ ukwuu nke usoro ihe omume bụ onye ọrụ-enyi na enyi ya ka ị ghara mkpa ịdị na-a IT guru ijide ya aka.
2. sub ụzọ
Ọzọ mfe iji, ma irè Ntụgharị bụ SubC. Ọ na-akwado MicroDVD, SubRip, SubStation Alfa na SubViewer 2.0 faịlụ. Usoro ihe omume guzo ya edezi atụmatụ na ike abịa kemfe. Na n'elu nke ị nwere ike mfe ịgbanwe usoro iheomume nke faịlụ tufuo nke tedious igbu oge. A ebube omume nwere ike iwere maka a ule mbanye na-enweghị nwụnye.
Ahịa: $ 5
Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ nwere ohere ọzọ dị elu atụmatụ, na-ahọrọ Cavena toolbox. Converting na-edezi atụmatụ nile na-ekechi otu. Na nke a multi-ọtọ mpempe software ị nwere ike tọghata faịlụ ederede n'ime sobtaitel faịlụ formats na Anglịkan. Niile nke na-ewu ewu TV formats na-akwado tinyere ụfọdụ na-erughị nkịtị n'anya. Cavena toolbox awade ntughari nke 30, 30DF, 25, 24 na ndị ọzọ oge Koodu na ziri ezi vetikal na kehoraizin n'ọnọdu. Usoro ihe omume a gụnyere ke software nke nkwadebe nke ndepụta okwu Tempo, ma nwere ike zụrụ dị ka a guzoro naanị ngwaahịa maka a ezi uche price. Ego ukara saịtị maka nkwado ego.
4. SRT Ndepụta Okwu Ntụgharị (ascii ka UTF8)
Nke a na usoro nwere ike ịzọpụta gị isi na-awa ma ọ bụrụ na i nwere nsogbu na ị na-elele Persian ma ọ bụ Arabic SRT ndepụta okwu. Ihe ọ na-eme bụ na-agbanwe agbanwe ngbanwe si ascii ka UTF8 mere na ndepụta okwu na-egosipụta n'ụzọ ziri ezi. Tupu ị gaba ị chọrọ nwụnye Java Standard Edition (Ghaat). Nke a bụ software ùkwù na-enye Java Oge ojiri gaa Environment na ọbá akwụkwọ na components mkpa na-agba ọsọ ọtụtụ omume na Web ọdịnaya n'okpuru 32-bit Windows PC.
5. Easy Ndepụta Okwu Ntụgharị
Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ a dị mfe mpempe software iji tọghata ndepụta okwu Easy Ndepụta Okwu Ntụgharị bụ azịza. Akakabarede usoro bụ ogologo-atụ; ị dị nnọọ eji '' Dọrọ na dobe '' ọrụ na ị bụ mpịakọta. Ndị kasị mma mma nke usoro ihe omume bụ na ọ na-adịghị achọ ihe ọ bụla echichi, ị nwere ike na-agba ya na otutu kọmputa na iji a mbughari ngwaọrụ. Nanị drawback bụ na i nwere ike ezipụta ihe mmepụta ndekọ dị iche iche karịa isi iyi.
6. Ntụgharị Napisow
Nke a bụ ihe online sobtaitel Ntụgharị na-abịa na kemfe mgbe ị na-dị nnọọ achọ isi ọrụ. Ị nwere ike ịgbanwee asụsụ nke saịtị na-Japanese, German, Italian, Dutch, Malay na English n'ezie. Akakabarede formats-akwado site na saịtị na-agụnye .txt (MicroDVD), .sub (MicroDVD), .srt (SubRip), .mpl. Ọzọkwa, i nwere ike ịgbanwe ọsọ nke okpokolo agba kwa abụọ (fps). Ọ na-atọrọ ka 25,000 gị mma ma a pụrụ mma aka. Mgbe ị bulite faịlụ, bulie asụsụ na ị dị njikere na-aga. Ọ bụrụ na ị bụ obere na oge, nke a bụ ihe ezi uche nhọrọ ma buru n'uche na ya arụmọrụ bụ rudimentary.
7. Ndepụta Okwu Ntụgharị
Ebe a bụ obere ngwa maka Mac hụrụ na mkpa a ngwọta maka ha sobtaitel nsogbu. Akpaaka nchọpụta nke ngbanwe bụ nnọọ otu n'ime elele nyere site ngwá ọrụ a. Ekwu goodbye ka scrambled ndepụta okwu na-egosi ọ bụla mgbe a na mgbe. Onye ọrụ interface na-anọchi anya otu window na-akwado Dọrọ na dobe ọrụ. Ike gwụrụ nke na-emeso ndị Tekno mambo jumbo? Nke a dị nnọọ ka ị.
8. Ndepụta Okwu Flex
Ebe a na-abịa a magburu onwe online ngwá ọrụ na-prides onwe ya ya egosipụta ọtụtụ ihe; ihe niile si ịmafe formats, kewara na ijikọta ndepụta okwu ka n'ịgbanwe ọnụego ma ọ bụrụ na ọ na-adịghị adanyekọta na fim usoro iheomume. Akụkụ ọzọ uru banyere bụ akpaka mwepụ nke HTML dị ka ma ọ bụ. Wepụta a nkeji ole na ole na-agagharị na site na atụmatụ iji na-enweta ọtụtụ n'ime ya. The Mmepe na-emeghe ka aro ma ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla echiche na-eche free izipu ha n'elu.
9. Ndepụta Okwu Dezie
Ndepụta Okwu Dezie bụ otu n'ime n'elu ranking ngwaọrụ dị ka tech blọọgụ. Ọrụ-erite uru nke a dị mfe ma ọtọ interface. Ndepụta Okwu Dezie nwere ike ahaziri ona ọ bụla onye ọrụ si mmasị. Ke adianade do n'ịtụgharị ndepụta okwu, ọ na-enye edezi atụmatụ. Ị nwere ike ịhọrọ site na a dịgasị iche iche nke na-akwado sobtaitel formats. Ọ bụrụ na ị bụ onye na n'elu ikpo okwu customization hụrụ n'anya, a usoro kwesịrị na n'elu gị mkpa ndepụta.
Aha nke usoro ihe omume ekwu maka onwe ya, ọ na-enyo sobtaitel akakabarede na nwa play. Mepụta sup faịlụ site ọkọ na ole na ole clicks. Site na nbudata ìhè a mpempe software, ị ga-enwe ike sub faịlụ site ọkọ.
Olee otú Jiri Google Play Music on iPhone, iPad, iPod
Olee otú iji tọghata QuickTime MOV ka FLV (Yosemite gụnyere)
Olee otú iji tọghata QuickTime MOV ka SWF na Mac / Win (Windows 10 gụnyere)
Olee otú Play MKV on LG TV
> Resource> tọghata> Top 10 Ndepụta Okwu converters